कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज वैशाख १७ गते मंगलबारको राशिफल ! - PUBLICAAWAJ
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज वैशाख १७ गते मंगलबारको राशिफल !
प्रकाशित : सोमबार, बैशाख १६, २०७६१७:३३ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
वि.सं. २०७६ साल वैशाख १७ गते। मंगलबार। इश्वी सन् २०१९ अप्रिल ३० तारिख। शकसंवत् १९४१। परिधावी संवत्सर। उत्तरायण। वसन्त ऋतु। नेपाल संवत् ११३९ चौलागा। वैशाख कृष्णपक्ष। तिथि– एकादशी, २३:५५ बजेउप्रान्त द्वादशी। नक्षत्र– शतभिषा, ८:१४ बजेउप्रान्त पूर्वभाद्रपदा। योग– ऐन्द्र, २९:१५ बजेउप्रान्त वैधृति। करण– वव, १०:५७ बजेदेखि वालव, २३:५५ बजेउप्रान्त कौलव। आनन्दादिमा मृत्यु योग। चन्द्रराशि– कुम्भ, २८:०७ बजेउप्रान्त मीन। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५:२८ बजे, सूर्यास्त– १८:३६ बजे र दिनमान ३२ घडी ५० पला। पञ्चक। वरुथिनी एकादशी व्रत। त्रिपुष्कर योग २३:५५ बजे उप्रान्त।
आजको दिन सामाजिक कार्यमा र मित्रको साथ व्यतित हुनेछ । मित्र मण्डलमा नयाँ मित्र जोडीनेछन् । मित्रको लागी धन खर्च हुनेछ । ठुलाबडाको तर्फबाट लाभ हुनेछ । उनीहरुको सहयोग मिल्नेछ । आकस्मिक धन लाभले मानसिक प्रशन्नता बढाउनेछ । सन्तानबाट शुभ समाचार मिल्नेछ । प्रवास, पर्यटनको सफलतापूर्वक आयोजन गर्न सक्नु हुनेछ ।
नोकरीमा पदोन्नतिको समाचार मिल्नेछ । शिर्ष अधिकारीहरुको सहयोग प्राप्त हुनेछ । सरकारी निर्णय तपाइँको पक्षमा आउँदा लाभ हुनेछ । दाम्पत्य जीवनमा मधुरता रहनेछ । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । धन र मन-सम्मानको प्राप्ति हुनेछ ।
थोरै प्रतिकुलताको सामना गर्नु पर्नेछ । स्वास्थ्य खराब हुन सक्दछ । कुनै पनि कार्य गर्ने उत्साहमा कमि आउनेछ । नोकरीमा साथी कर्मचारी र शिर्ष अधिकारीको व्यवहार सहयोग पूर्ण नहुँदा मानसिक निराशता हुनेछ । सन्तानको सम्बन्धमा समस्या आउनेछ । विरोधीको साथ वादविवादमा नपर्नु होला । पितालाई समस्या आउनेछ ।
आजको दिन तपाइँमा नकारात्मक व्यवहार हावी रहनेछ । अधिक क्रोध रहनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । अनैतिक कामवृत्तिमा संयम राख्नु होला । कुटुम्बीजनको साथ झगडा विवाद हुने सम्भावना छ । आर्थिक अभाव रहनेछ । आध्यात्मिकताको सहर लिनु होला ।
मनोरंजन तथा घुम-फिरमा समय व्यतित हुनेछ । जीवनसाथीको स्वास्थ्य खराब हुने सम्भावना छ । विपरित लिंगीय व्यक्तिको साथको भेटघाट आनन्ददाय रहँदैन । व्यापारमा भागीदारीको साथ धैर्यतापूर्ण व्यवहार गर्नु होला । सार्वजनिक जीवन तथा सामाजिक जीवनमा कम सफलता मिल्नेछ ।
परिवारमा आनन्द एवम् उत्साहको वातावरण रहँदा मन प्रशन्न रहनेछ । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । बिरामी व्यक्तिको स्वास्थ्यमा केहि सुधार तथा राहतको अनुभव हुनेछ । कार्यमा सफलता र यश मिल्नेछ । कार्यालयमा सहकर्मीगण र व्यापारमा प्रतिस्पर्धीबाट नोक्सान हुने सम्भावना छ । मामाघर पक्षबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ ।
आफ्नो कल्पनाशक्ति र सृजनशक्तिले कार्य सम्पादन गर्नु हुनेछ । बौद्धिक प्रवित्ति र चर्चामा भाग लिन मन पराउनु हुनेछ ।सन्तानको तर्फबाट शुभ समाचार मिल्नेछ । उनीहरुको प्रगति हुनेछ । स्त्री मित्रको सहयोग मिल्नेछ । प्रिय व्यक्तिको साथ सुखद मिलन हुनेछ । अत्याधिक विचारले मन विचल्लित बन्नेछ । सामान्य रुपले शारीरिक र मानसिक स्फुर्तीको साथ सबै कार्य गर्नु हुनेछ ।
आजको दिन शान्तीपूर्ण व्यतित गर्नु होला । शारीरिक स्वास्थ्य त बिग्रनेछ नै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि समस्या आउनेछ । माताको स्वास्थ्यको सम्बन्धमा चिन्ता रहनेछ । पारिवारिक सदस्यको साथ मनमुटाव हुँदा मन दुखि रहनेछ । स्थायी संपत्ति तथा वाहन आदीको दस्तावेज गर्दा सावधानी अपनाउनु होला । स्त्री वर्गको नोक्सान हुने सम्भावना छ । जलाशयको भय रहनेछ ।
आज रहस्यमयी र आध्यात्मिकताको रंग चढ्नेछ । त्यसैले यस विषयमा गहिराईमा उत्रने प्रयास गर्नु हुनेछ । नयाँ कार्य गर्न प्रेरित हुनु हुनेछ । स्वास्थ्य राम्रो रहनुको साथै मन प्रशन्न रहनेछ । लघु यात्राको सम्भावना छ । मित्र तथा संगी सम्बन्धीको साथको भेटघाट सुखमय रहनेछ । भाग्यले साथ दिनेछ । व्यापारमा प्रगती हुनेछ ।
वाणीमा संयम राख्दा अनर्थबाट जोगिनु हुनेछ । पारिवारिक सदस्यको साथ मनमुटाव हुन नदिन यो आवश्यक छ । विद्यार्थीले पढाईमा निकै परिश्रम गर्नु पर्नेछ । नकारात्मक विचारमा काबु राख्नु होला । स्वास्थ्य मध्यम रहनेछ । दाहिने आँखामा समस्या हुने सम्भावना रहेको छ ।
शारीरिक, मानसिक र आर्थिक प्रत्येक दृष्टिले आजको तपाइँको दिन राम्रो साबित हुनेछ । परिवारको साथ सुरुचीपूर्ण भोजनको आनन्द उठाउन सक्नु हुनेछ । मित्रको साथ घुम-फिरको आयोजन हुनेछ । तपाइँको चिन्तन शक्ति र आध्यात्मिक शक्ति पनि राम्रो रहनेछ । दाम्पत्य जीवनको मधुरताको आनन्द उठाउन सक्नु हुनेछ । उपहार र धनको प्राप्ति हुनेछ । पुरै दिन प्रफुल्लतामा व्यतित हुनेछ ।
थोरै समयमा धेरै लाभको लालच त्याग्नु उचित हुनेछ । मनको एकाग्रतामा कमि आउनेछ । शारीरिक स्वास्थ्यमा खराबी आउनेछ । सन्तानको समस्याले उल्झनमा पुर्याउनेछ । स्वजनको साथ टाढा जाने अवसर मिल्नेछ । धार्मिक कार्यमा धन खर्च हुनेछ । महत्वपूर्ण दस्तावेजमा सावधानी अपनाउनु होला । पैशाको लेन देनको लागी अनुकुल समय छैन ।
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन ८ गते बुधबारको राशिफल !
कस्तो रहला तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असार २९ गते आइतबारको राशिफल !